Archive de l'auteur | NewsMada | Page 1109
Fakafaka : hifarana ny resa-boky…
Par Taratra sur 26/04/2016 Divers, NS Français
… Hanao ahoana ny dingana vita ? Tratra ve ny tanjona ? Eo am-piandrasana ny valin’ireo fanontaniana ireo, tsy takon’afenina ny ezaky ny efa mpanao sy ny jery vilan’ireo mpitazam-potsiny. Tsy midika ho fifanomezan-tsiny akory, fa fanehoana ny zava-misy ihany ! Nandritra ny fanamarihana ny Andro eran-tany ho an’ny boky sy ny zon’ny mpanoratra, tamin’ity taona 2016 ity […]
Par Taratra sur 26/04/2016 Economie, NS Malagasy
Tombanana eo amin’ny 2.000 ny isan’ireo mpivarotra, manodidina eo Analakely, Behoririka, Isotry. Mpivarotra lamba, kiraro, poketra, haingon-trano, telefaonina, sns. Mbola hafa ireo mpivarotra any Andravoahangy, 67 ha … Hafa ihany koa ireo mpivarotra sakafo sy kojakoja madinika samihafa izay misy anarivony. Faritra afaka haba iray lehibe ho azy ireo eto an-dRenivohitra. Nohazavain’ny mpamongady iray fa […]
Fikambanana Tsimisaramianakavy : « Tsy marina fa tsy misy asa eto Madagasikara »
Tsimisaramianakavy. Fikambanan’ny mpanao asa tanana avy amin’ny faritra 22, mampivoatra ny maha malagasy amin’ny asa tanana. Ny faran’ny herinandro teo, nisy 52 amin’izy ireo nanao fampisehoana tao amin’ny Lapan’ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena, Mahamasina, samy nampiseho fahaiza-manaony manaporofo ny kolontsaina malagasy amin’ny vokatry ny asa tananan’izy ireo. « Iray ihany ny Malagasy fa ampiadian’ny vazaha […]
Rafitra Horeb : famokarana manome andraikitra ny orinasa
Manohana ny tantsaha mpamokatra ny orinasa mpandray ny vokatra, amin’ny alalan’ilay rafitra Horeb. Tanjona ny hananana vokatra manara-penitra sady mitsinjo ny tontolo iainana. Nanao famelabelaran-kevitra mikasika ny rafitra Horeb ny mpandraharaha Rasamimanana Faly, mpandraharaha, sy ny teknisianina amin’ny Andraikitry ny orinasa amin’ny famokarana na Responsabilité societale des entreprises (RSE), Randriamaniraka Michael, ny herinandro lasa teo. […]
Magro Ankorondrano : tsy miraharaha ny didim-pitsarana ny Tiko
Maro ny nahatsikaritra fa ahitana kaontenera maromaro an’ny orinasa Tiko, etsy amin’ny Magro Ankorondrano. Nametrahana vavahady ihany koa eny an-toerana. Raha ny didim-pitsarana anefa, tsy azon’ity orinasa ity hatao ny mampiasa io toerana io. Izany hoe, iniana atao ny mandika sy tsy miraharaha ny lalàna manankery, fa mihevitra ho azy ny tany. Tsy hita, araka […]
Ambohimahasoa – Fianarantsoa : manaitra ny mpitondra amin’ny haratsin’ny RN7 ny mponina
Par Taratra sur 26/04/2016 Faits Divers, NS Malagasy
Na ny lehiben’ny faritra Matsiatra Ambony, Tiana Joel na ny filoha lefitry ny Antenimierandoholona, Andriamandavy Riana, samy nangataka ny hijerena ny lalana any an-toerana. « Efa nangataka ary mbola mangataka amin’ny minisitry ny Asa vaventy izahay mba hanamboarana ny lalan-dratsy, 30 km miala eo Ambohimahasoa hidirana an’i Fianarantsoa, ary mihazo ny tapany atsimon’ny faritra Matsiatra Ambony […]
Ambatondrazaka : vita ny 67%-n’ny lalana ao an-tampon-tanàna
Tafiditra ao anatin’ny faritra iasan’ny Tetikasa Ambatovy ny any Alaotra Mangoro. Niantohany ny fanarenana ny lalana ao an-tampon-tanàn’ Ambatondrazaka, renivohitry ny faritra, toy ny fanamboarany fotodrafitrasa maro any amin’ireo tanàn-dehibe hafa (Toamasina, Moramanga, Brickaville, sns). Nahatratra 70.000 ora ny fotoana niasana tany an-toerana, ka tsy nahitana loza mihitsy, na iray aza teo am-panaovana ny asa, […]
Hetsika sendikaly 1 mey : nilaza hamaky bantsilana ny fomba fanaramana ny F3M
Par Taratra sur 26/04/2016 NS Malagasy, NS-Politique
Sambany indray. Na mbola eo am-pandaminana ny hitondrana ny hetsika hanamarihana ny fetin’ny asa, ny 1 mey, izao, aza ny sendikà samihafa, efa nanambara ny hankalazana izany ny Fiaraha-mientan’ny mpiasam-panjakana (F3M). Efa miala any koa anefa ireo mpanao politika, efa fantatra amin’ny fanaony… « Hamaky bantsilana sy hamoaka ny zava-miafin’ny fomba fanaramana ny asam-panjakana eto amintsika […]
Madagasikara : 1.000 taona nanimbana ny ala ny malagasy
Zara raha ny 10%-n’i Madagasikara ihany sisa ny ahitana ala. Nanamafy ny fanadihadiana nataon’ny manampahaizana amerikanina fa efa nahatratra 1.000 taona izao ny nahafoana ny ampahany betsaka amin’ny ala eto amintsika, nodoroan’ny mponina, nanaovana kijana ho an’ny biby fiompy. Araka ny fikarohana nataon’ny Ivontoerana momba ny teknolojia any Massachusetts (Mit), nohalalinina ny akora vitsivitsy tanaty […]
An-kitsim-po : tsy misy antontanisa momba ny tsy anasa
Par Taratra sur 26/04/2016 Divers, NS Malagasy
Tsy misy antontanisa mazava momba ny tsy anasa. Fantatra fotsiny ny fitomboan’izy ireo isan-taona, ny tanora fa manampy azy ireo koa ireo very asa avy any amin’ny sehatra tsy miankina. Tsy fantatra mazava ny sokajin’asa ahitana tolotra betsaka. Tsy mazava ny tolotr’asa takin’izao vanim-potoana izao na any amin’ny fanjakana na any amin’ny sehatra tsy miankina. […]
Ambasadaoro frantsay : « Tokony hitsahatra ny kidnapping… »
Mazava ny nambaran’ny ambasadaoro frantsay, Vouland-Aneini, raha noraisin’ny Praiminisitra Mahafaly Solonandrasana teny Mahazoarivo, omaly. « Tsy tokony hiseho intsony ny fakana an-keriny teratany vahiny na Frantsay… », hoy izy. Notsiahiviny fa manana zo harovana izy ireny, indrindra ny eo anivon’ny konsily. Na izany aza, nambarany fa efa mitondra ny anjara birikiny amin’ny fanamafisana ny fametrahana filaminana sy […]
Taolagnaro : nanampy ireo kere ny mpino sonita
Mitohy hatrany ny hetsika fanampiana sy fanohanana ataon’ny fianakaviamben’ny mozolimanina sonata (CMSM). Nitondra ny voantsirambin’ny tanana ho an’ireo mponina tratry ny kere sy ny tsy fanjarian-tsakafo any amin’ny faritra Anosy izy ireo ny 20 avrily teo. Anisan’ny nahazo tombony amin’izany ny ao amin’ny kaominina Soanierana, ahitana ny fokontany Andramaka. Notoloran’ny CMSM kojakoja ilaina amin’ny fiainana […]
Hohatsaraina mba hahazoana vokatra tsara kokoa amin’ny ady atao. « Hiezaka hitady ny fomba hanatsarana ny fiaraha-miasa amin’ny fitsarana izahay, manomboka izao, mba hampahomby kokoa ny ady atao », hoy ny loharanom-baovao avy eny Ambohibao. Nambaran’ny eo anivon’ny Bianco fa tanjona ny hanarahana maso akaiky kokoa ireo raharaha tafiditra amin’ny resaka kolikoly nampidirina eny amin’ny fitsarana. Anisan’ny […]
Andavamamba : tratra tao ambany gorodona ny basy kilalao fampiasan’ireo jiolahy
Basy kilalao no entin-dRadadatoa sy ny namany manendaka sady mampihorohoro eny Isotry sy ny manodidina. Ny alakamisy 21 avrily 2016 teo izy roa lahy no tratran’ny polisy avy ao amin’ny boriborintany fahefatra tao an-tranony eny Andavamamba niaraka tamin’ilay basy kilalao. Araka ny fanazavan’ny polisy, nahazo loharanom-baovao izy ireo, fa misy lehilahy iray mitazona basy ao […]
Analakely : tratra ireo jiolahy nangalatra môtô-n’ny polisy
Saron’ny polisy, ny alakamisy lasa teo, ireo jiolahy telo voarohirohy ho tompon’antoka tamina halatra môtô ana polisy miasa ao amin’ny boriborintany voalohany Analakely. Samy efa nigadra avokoa ireto jiolahy ireto… Napetrak’ilay polisy teo anoloan’ny casino iray etsy Ambodifilao ny môtô scooter, ny 19 avrily 2016 lasa teo ka very tamin’io fotoana io ity môtô ity. […]
Fitsaram-bahoaka : novonoin’ny olona ilay mpangalatra lavanila
Lehilahy iray 30 taona indray no matin’ny fitsaram-bahoaka, ny zoma teo tany Mananara Avaratra. Araka ny fampitam-baovao avy any an-toerana, tratran’ny fokonolona nangalatra lavanila mbola teo am-potorany izy ary nongotany hatramin’ny fakany sy ny tahony mihitsy izany. Nahatratra teo amin’ny 80 kg ny lavanila tratra tany aminy ka tsy namelan’ny fokonolona izy raha tsy namoy […]
Nanomboka tamin’ny 7 ora sy 30 mn, omaly, tsy afa-niasa intsony ny taxibe mampitohy an’Ambatofotsy sy Cnaps Anosy, Mandrimena sy 67 ha na Analakely sy Mandrimena. Ireo mpamily sy ny mpanampy azy minia mbola miasa azon’ny fandrahonana samihafa ka natahotra ary lasa nanatitra fiara nody no niafarany. Misy ny manala ny takelaka milaza ny zotra […]
Hetsika eo Analakely : hiatrana ny Emmo/Reg, anio
Tsy hisangy ! « Handray ny fepetra rehetra mifanandrify amin’izany izahay amin’ireo hetsika tsy nahazoana alalana avy any amin’ny prefektiora … », hoy ny lehiben’ny CIRGN, ny Jly Rakotomahanina Florens, omaly. Nohitsiny fa mety hiseho ny fanararaotana samihafa, hiteraka savorovoro na ho tonga amin’ny fandrobana mihitsy aza. Etsy andaniny anefa, nilaza ny hanao hetsika manoloana ny lapan’ny Tanàna […]
Mbola ho ela e !!!
Par Taratra sur 26/04/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Ny fitokonana, na koa ny fandrahonana hanao fitokonana. Izay indray izao no malaza tato ho ato. Omaly izao, nitokona sy nanao fihetsiketsehana an-dalambe ireo mpitatitra amin’ny taxibe, avy amin’ny koperativa maromaro, miasa amin’iny faritra Atsimondrano iny. Voalaza fa hoe noho ny «fanorana» sy ny antsojay lava ataon’ny polisy azy ireo no anton’ny fitokonana. Ny ankilany […]
Aroriaka : hetsika mpikarama an’ady sy tsy misy fotony
Par Taratra sur 26/04/2016 Faits Divers, La Une, NS Malagasy
Efa nampoizina. Miezaka mitondra hevitra etsy sy eroa hendresena lahatra ny olona hanaraka azy ny mpitarika ny fikambanana Aroriaka, tarihin’Rakotonirina Odon Gregoire. Mazava anefa izao fa mpikarama an’ady sy tsy manana fototra mazava sady mamita-bahoaka izy ireo. Tsy manana olona mpanaraka na mpikambana ny Aroriaka. Fankahalana vahiny tsotra izao fotsiny ny fotokevitra ijoroany sy […]
Rugby vehivavy : ezaka be vao tompondaka ny SCB Besarety
Par Taratra sur 25/04/2016 NS Malagasy, NS-Sports
Anisan’ny klioba nahavita dingana goavana, ho an’ny taom-pilalaovana lasa iny, teo amin’ny taranja rugby, ny SCB Besarety, sokajy vehivavy. «Asa be sy fikirizana vao tratra ny tanjona», hoy Ravoavahy Lantonirina mpanazatra. Gazety Taratra (*) : Nanao ahoana ny taom-pilalaovana 2015, ho an’ny SCB Besarety? Lanto (-) : Raha lazaina aloha dia tsara ny vokatra ho anay […]
Grand Gala de Kick-boxing : hiady toerana Rojolalaina sy Alain ary Navalona
Par Taratra sur 25/04/2016 Divers, NS Malagasy
Hotanterahina etsy amin’ny kianja mitafon’i Mahamasina ny alahady 1 mey ho avy izao, ny «Grand gala de kick-boxing». Hetsika hifantenana ireo handrafitra ny ekipam-pirenena, ho an’ity taona 2016 ity. Anisan’ny sokajy hanaovana fifantenana ny eo amin’ny – 57 kg, hifanandrinan’i Rojolalaina sy Alain ary Navalona sy Ratovoson. Izay afaka amin’izy efatra mirahalahy ireo no ho […]
Atletisma – La Réunion : nahazo volamena i Embony Elodie
Tontosa ny faran’ny herinandro teo, tatsy La Réunion ny fifaninanana « Meeting de La Réunion », eo amin’ny taranja atletsima. Nanana solontena efatra mianadahy i Madagasikara. Araka izany, nahazo medaly volamena teo amin’ny hazakazaka 100 m i Embony Elodie. Vitany tao anatin’ny 11’69 ny fifaninanana izay nahazoany ny laharana voalohany. Tsy vaovao amin’i Embony Elodie ihany koa […]
Betafo : hitohy hatramin’ny 2017 ny vatsin’Ankohonana
Hitohy hatramin’ny volana aogositra 2017 ny tetikasa fanomezana vatsin’Ankohonana ho an’ny fianakaviana sahirana. Ao Betafo, iray amin’ireo distrika notolorana izany, 5 807 ny fianakaviana (amin’ny fokontany 54) nisitraka ny fanampiana mahatratra 20 000 Ar omena isam-bolana. Entina handrisika ny ray aman-dreny hampiditra ny zanany an-dakilasy ny vatsy ka arakaraka ny isan’ny zaza ny sora-bola omena amin’ny alalan’ny […]
Dren valo : mpampianatra 1000 hofanina am-pitain-davitra
Par Taratra sur 25/04/2016 Faits Divers, NS Malagasy
Hitohy ny fampiofanana am-pitain-davitra ho an’ny mpampianatra (Fadep.mg) amin’ny alalan’ny fampiasana ny teknolojia vaovao. Natokana ho an’ny mpampianatra eny amin’ny EPP ny amin’ity taona ity, raha efa nahazo izany ny talen’ny EPP sy mpanabe hafa 48 000 tamin’ny taon-dasa. Miavaka ny kalitaon’ny lesona ao anatiny, hanamorana ny fampitana ny fahalalana amin’ny mpianatra. Ho an’ny mpampianatra 1000 […]
« Précédent 1 … 1 107 1 108 1 109 1 110 1 111 … 1 209 Suivant »